Tag: sms kuuboonada | Martech Zone
Tag: sms rasiidh
Jimco, Juun 4, 2021 Jimco, Juun 4, 2021 Douglas Karr
Bilaabida istiraatiijiyadda farriinta qoraalka waxay noqon kartaa geedi socod hirgelin cabsi leh. Rumayso ama ha rumaysan, gudbiyeyaashu badanaa gacanta ayey ku hayaan xitaa maanta… soo gudbi waraaqo, haynta xogtaada iyo siyaasadaha asturnaanta dib u eeg, saxeex ogolaanshaha SMS. Ma isku dayayo inaan hoos u dhigo muhiimada ay leedahay u hogaansanaanta warbaahintani, laakiin jahwareerka hayaanka ama isku darka xalka SMS wuxuu noqon karaa mid aad uga careysiiya ogolaansho ku saleysan, suuq sharciye ah Nidaamka loogu talagalay Suuqgeynta SMS-ka ayaa ah a
SlickText: Maxay Yihiin Astaamaha Iyo Awoodda Isku Dhaxgalka Suuqgeynta Suuq-geynta SMS?
Talaado, Disembar 8, 2020 Arbacada, December 23, 2020 Douglas Karr
Ganacsiyada badankood waxay ka fekeraan farriinta qoraalka oo kaliya awoodda ay ugu diraan farriin qoraal macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, farriimaha SMS iyo MMS ayaa isbeddelay sannadihii la soo dhaafay. Marka laga soo tago shuruudaha u hoggaansanaanta aasaasiga ah, barnaamijyada suuqgeynta ee farriinta qoraalka ayaa si weyn ugu xuubsiibtay tiro ka mid ah xulashooyinka kaqeybgalka, otomatiga, qeybinta, shaqsiyeynta, iyo awooda is-dhexgalka. SlickText waa madal sifiican ujirta, qaab muuqaal hodan ku ah farriinta qoraalka taas oo u adag ganacsiga aasaasiga ah ee doonaya kaliya inuu sameeyo xoogaa qoraal ah wuxuu bixiyaa dhammaan
Waxaan haynaa Podcast la yaab leh oo dhowaan lagu soo daabici doono Shel Israel oo ku saabsan buugiisa, Deeqsinimada Dhimashada. Mid ka mid ah mowduucyada igu dhuftay wadahadalka ayaa ahaa intee in le'eg oo tiknoolajiyad ah oo la hirgeliyey si loo kordhiyo wax soosaarka iyo saxnaanta macaamiisha dhab ahaantii kaliya ayaa xakameynaya macaamilka macaamilka gacmihiisa dhexdiisa. Malaha caqabad ka weyni ma jiro inaad maamusho makhaayad guuleysata maalmahan. Inta udhaxeysa kharashyada tamarta, wareejinta shaqaalaha, xeerarka, iyo
Saaxiibka wanaagsan Adam Small wuxuu leeyahay barxad qoraal suuqgeyn moobiil ah oo u arka heerar madax furasho oo cajiib ah dalabyada qoraalka SMS. Mid ka mid ah farsamooyinka uu ii sheegay oo ku saabsan macmiilkaas oo soo bandhigay keen saaxiibtinimo dalab halkaasoo aad ka heshay gariir bilaash ah markaad saaxiib u keento aasaaska. Waxay diri lahaayeen qoraalka nus saac kahor qadada waxaana jiri lahaa khad albaabka ka baxa. Waa fikrad weyn maxaa yeelay ma tihid
Suuqgeynta Mobaylka: Ka dhig Shaqsiyeed
Khamiis, May 29, 2014 Douglas Karr
Baadhitaanka khadka tooska ah ee Hipcricket ee 2014, Akhlaaqda Macaamiisha ee Suuqgeynta Mobaylka, waxaa la qabtay bishii Abriil 2014 waxaana lagu bartilmaameedsaday 1,202 qof oo waaweyn oo Mareykanka ah. Sahanku wuxuu ogaaday in Markmark ay durbaba korsanayaan mobilada macaamiishana ay ka jawaabayaan. Seddex meelood labo meel jawaabeyaasha ayaa sheegay inay farriin qoraal ah ka heleen astaan ​​6-dii bilood ee la soo dhaafay iyadoo ku dhowaad kala badh macaamiisha ay u arkeen fariinta qoraalka inay waxtar leedahay. Si kastaba ha noqotee, suuqleyda ayaa seegaysa calaamadda markay tahay dirista farriimaha la xiriira, shakhsi ahaaneed, taas oo